कोरोना- निको भएर फर्किएकामा साढे दुई महिनापछि पुन: पोजिटिभ ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना- निको भएर फर्किएकामा साढे दुई महिनापछि पुन: पोजिटिभ !
एजेन्सी – विश्वमै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ३४ लाखभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण भएको पाइएको छ । अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण विश्वभर २ लाख ३९ हजार ५९२ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
कतिपय बिकसित मुलुकले कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको दावी गरेपनि यसको निराकरण गर्ने औषधि ठोस रुपमा कुनैपनि मुलुकले पत्ता लगाउन सकेको छैन् । यही क्रममा चीनका अनुसन्धानकर्ताहरुले भने कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा नयाँ तथ्य फेला परेको दावी गरेका छन् ।